Lahatsoratra tsy mbola novakiana by lpklem » 19 Mar 2018, 16:57
Alohan'ny hanombohako, dia misy tampoka amin'ny Air Force One 747-8I add-on, no tsara indrindra add-on fiaramanidina nihazakazaka aho ho an'ny fanontaniana roa ho an'ny vondrona:
1) Fantatro ny fomba fanendrena bokotra fifaliana (ny fikafika) hampidirana ny môtô AF1 ahy fa tsy azoko atao ny mametaka ny valindrihana 4 miaraka indray mifamadika? Raha tsy misy izany dia tsy mahazo afa-tsy 10% faran'izay kely indrindra aho, tsy fanampiana be dia be amin'ny hazakazaka 6'000ft grrrrr
2) Manana rafitra mpanara-maso roa aho, ny mpanara-maso lehibe dia manana ny efijery mahazatra VC sns, ny faharoa ampiasako amin'ny fomba fijery Instrument isan-karazany, maharitra fotoana fohy ny fanamboarana isaky ny milalao aho, nanandrana nitahiry ny sidina aho rehefa namboarina saingy aza tehirizina ny fanomanana efijery faharoa. Izay sosokevitra rehetra dia hankasitrahana.
Misaotra an'ity tranonkala ity, tiako izany!
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Gh0stRider203 » 19 Mar 2018, 17:00
Mampalahelo fa tsy afaka manampy an'io aho na dia mahaliana aza izany. Azonao atao ve ny manamarina ve? FSX Vondrona ao amin'ny FB? Fantatro fa maro aho ary toa manana fahalalana (amin'ny ankamaroan'ny zavatra ...... amin'ny hafa izy ireo dia mahasoa toy ny omby amin'ny omby ....).
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by DRCW » 19 Mar 2018, 18:38
Eh, ny FSX Manome matrix dia haavo ambany noho ny hazo fifaliana sy ny fitaovana fiaramanidina sasany. Saingy azonao atao ny manandrana izao manaraka izao ... Midira ao amin'ny bokotra ary asio fanalahidy ary ampidino ilay faritra izay ahitanao ny F2 (Ny lakilen'ny Reverse) asongadino io fizarana io, ary atero ny lakilem-piambenana eo amin'ny soratanao. Raha mihetsika izy ary hitanao fa miova izy, dia ho lasa lakilen'ny famerenana ny bokotra mpanentana. Mirary anao ho tsara vintana
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by lpklem » 19 Mar 2018, 19:52
Izany no nanendreko ny bokotra fifaliana mba hihemotra na dia nametraka averimberina aza aho mba tsy hihoatra ny 10% ny tosika miverimberina, ny minitra ampitomboiko ny fanamafisana amin'ny alàlan'ny fifehezana ny valin'ny fifaliana dia ny fanafoanana azy fotsiny dia ny fanafoanana sy ny fametahana azy ara-dalàna, tsy ny tena marina. inona no tadiavinao amin'ny hazakazaka am-pilaminana. Misaotra noho ny fidirana oe, tiako io !!!!
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by DRCW » 19 Mar 2018, 20:55
Ie, efa nanandrana tsindry bokotra marobe ve ianao? Izy io dia niasa ho ahy, saingy bokotra hafa tamin'ny foko hafaliana io. Eritreritra fotsiny, fa FSX dia programa voafetra amin'ity faritra ity ..